Ngamunye wethu uzama ukusindisa imali ukuthenga. Hhayi ngoba sinawo iyiphi ungoqo. Vele, lokhu kungokwemvelo. Kungani kufanele ukhokhe uma unayo izinga elifanayo umkhiqizo nje phezu ngenani eliphusile. Njengoba wazi, sikhuluma izitolo inthanethi. Ukuthenga nge-World Wide Web - cishe indlela engcono afeze izinga izinto cishe ngamanani umkhiqizi. Ngakho kanjani ezishibhile ukuthenga inthanethi?
Impendulo empeleni kabi. Kwanele ukhethe esitolo online ukuthi kakade ikufakazele ngokwayo kule makethe ngesevisi yayo engcono wenze ukuthenga. Taobao ikhathalogi come365.com - ukukusiza.
Yebo, kule minyaka Inthanethi ukuthenga emhlabeni namuhla, izigidi zabantu. Yebo, kungakhathaliseki ukuthi emakhulwini ezigidi. Futhi lokhu - ngokulandelana izinto. izimpahla Akubizi ku-inthanethi futhi ukuthola iqiniso namuhla, akukho nobunzima. Ngisho ikakhulukazi ukuthi akunjalo. Njengoba siye kakade waveza, vele uye come365.com, futhi ke qiniseka ukuthi ngamabomu waya kule sayithi.
Ngakho kungani ezishibhile ngakho futhi izuzisa ukuthenga i-Internet? Osomabhizinisi abatshala imali yabo ibhizinisi ukuthi kusekelwe ukudayiswa adabule World Wide Web, usuku ngalunye oludlulayo ke kuba more. Futhi ngengozi, leli qiniso akakwazi ngokuthi nganoma iyiphi indlela. Cabanga nje ukuthi yimalini amabhizinisi ukuchitha ku iqashwe namaholo. Kulesi esitolo inthanethi anidingi.
Ukuze ephansi uyowuthenga into ku-intanethi, vele ukubhalisa kwiwebhusayithi ekhethekile. Kwenze silula, futhi choice of Amakhasi virtual nje omkhulu. Yenza inkokhelo ngokuthenga kwakho ngeke kube nzima. Kwanele uthole siqu isikhwama electronic. Ungenza ukuthenga, futhi ikhadi plastic, kungumqondo uma bebona kunesidingo yakho.
Bese wonke scheme ejwayelekile. Ngemva lemali esifushane uzothola lokho abakufisayo, bangabi ngaphambilini. Courier uyokhulula ukuthenga kwakho noma ngqo ekhaya lakho noma eposini. Ngo befisa ezweni lanamuhla ezincane abazama ukunidukisa ngokusebenzisa esitolo inthanethi. Vele hhayi esilinganayo. Ngakho-ke, ungakwazi oda ngokuphepha unesithakazelo izimpahla, hhayi sikhathazeke ngalutho.
Njengoba kungase kube nzima, namanje zama ancike nje labo izitolo ukuthi okuye kwenziwa kuye kwabonisa kakade ngokwabo. Kuyinto efiselekayo ukuthi injengomoya eside ngangokunokwenzeka emsebenzini emkhakheni wemisebenzi. Themba ochwepheshe zangempela kuphela. Londoloza ukuthenga. Ungakuvumeli imikhonyovu namasu. Qaphela, futhi konke ukuphila kwakho, nakanjani angeke ezinhle! Lokhu kungaba ubani ngisho sokungabaza.
Kusukela sizogqokani ivesti of impungushe? jackets side of impungushe (isithombe)
Kusukela sizogqokani lesikhumba ibhulukwe: inhlanganisela yazo zonke izikhathi
Igama Zuhra: Inani uhlamvu, amandla
Iresiphi yesaladi yemifino ngamafutha yemifino: okuhlwabusayo futhi okunempilo
Kuyini sharaga? Meaning of igama elithi "sharaga".
Impendulo evela abasebenzi "Abaningi ifenisha." inkampani incazelo
Kungani womama ushiye izidingo